न्यायप्रेमी अभिभावकज्यूहरुमा मीठो सम्झना | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / न्यायप्रेमी अभिभावकज्यूहरुमा मीठो सम्झना
न्यायप्रेमी अभिभावकज्यूहरुमा मीठो सम्झना
Posted by: युगबोध in विचार April 16, 2019	0 60 Views
सम्पूर्ण न्यायप्रे मी अभिभावकज्यूहरु जो जहा“ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ मीठो स्मरणयुक्त सम्झना गनेर् जमकोर् मा छु। धे रै लामो समय बिते छ हजुरहरुस“ग पत्रमित्रता गरे को । पुनः तपाइ“को न्यायप्रे मी न्यानो सम्झनाले सतायो । अब त शैक्षिक सत्र २०७५ ले र वर्षको हिसावमा २०७५ ले पनि हामीलाई छो डे को छ। अभिभावकज्यूहरु हाम्रा वर्ष एवं शैक्षिक सत्र समग्रमा कसरी बितायौं ? २०७५ बाट के पायौं र के गुमायौ ? के –के अवसर र चुनौतीस“ग खे ल्यौ ? सकारात्मक नकारात्मक कस्तो रह्यो ? आरो ह अवरो हस“ग कसरी व्यवस्थित भयौं ? हाम्रा साना नानी बाबुहरुले के के गर्नु भो ? अब नया“ वर्ष २०७६ को यो जना के के छन् ? समीक्षा गरौं।
यो भन्दा अगाडि पनि नानी बाबुकै बढी चिन्ताका साथ पत्रमित्रता गरे का थियौं। अहिले पनि उहा“हरुकै चिन्ता पिरलो उस्तै छ। किनभने नानी बाबुहरुलाई असर पानेर् तत्वहरुमा जलवायुमा ठूलो फे रबदल आयो । शिक्षा क्षे त्र व्यवस्थित हुन सके न। आर्थिक पक्ष दुर्बलै रह्यो । सामाजिक पक्ष झनै चुनौती बन्ने लक्षण दे खियो । दे शमा पुनः अशान्ति बढ्ने लक्षण दे खिन थाल्यो । सिंगो समाज, युवा युवती, बृद्धबृद्धा र सबैभन्दा ठूलो असर नानी बाबुहरुकै जीवन भविष्यमा चुनौतीको रुपमा रहे को टिभी मो वाइलबाट उत्पन्न हुने समस्या र विकृतिले झनै तीब्रता लियो । लागूऔषध, मद्यपान र धुम्रपानको विकृति चुलिदै गयो । माथि उल्ले खित विषय वस्तुले के के कहा“–कहा“ के कस्ता समस्या रहन्छन् ? नानी बाबुहरुमा मात्र नभई सिंगो समाजलाई जलवायुले किन प्रभाव पार्छ र पा¥यो ? बे मौसमीको समस्याले चैतसम्म पनि झरी बादल, हिमपात, असिनाको कारण आवश्यक भन्दा बढी चिसो बढायो । तरकारी बाली र खाद्यबालीमा असर पा¥यो ।
हाम्रो दे श गरिवीको चपे टाबाट गुज्रे को छ। जसको कारण मौसमअनुसार लवाइखवाइ, आहार विहारको व्यवस्थापन हुन नसक्दा नया“–नया“ रो गको प्रभाव बालबालिकामा परे को छ। कुपो षण, निमो निया, टाइफाइड, चिसो डाइरिया, लहरे खो कीले सताउने गर्दछ। वर्तमानमा दे खिने जलवायु परिवर्तनले अकोर् लक्षण दे खाउ“दैछ। अक्सिजनको आवरण पातलो हु“दै छ। यदि ओ जो नमै समस्या आयो भने सूर्यबाट खस्ने वैजनी रंगका खतरनाक किरण सिधै पृथ्वीमा खस्न थाल्यो भने कल्पना गर्नुस्
ब्रह्माण्डमा के हो ला ? यो अवस्था किन सिर्जना हो ला ? हाम्रा बालबालिका समे तलाई हामी अभिभावकले कुन–कुन विषयमा सिकाउनुपर्ला र आफू समे त सतर्क हुनुपर्ला ? जनवायुमा असर पानेर् तत्वहरुः वनजंगल मासिदै गए। अक्सिजन स्वच्छ हावा हराउ“दै गयो । वृक्षारो पण गनेर् को भन्दा वनजंगल सखाप पानेर् भ्रष्टाचारी, तस्करीको जत्था बढ्दै गयो । यो विषयमा सिक्नुस् सिकाउनुस्।
बढ्दो कलकाराखाना, गाडी मो टर, धुलो धुवा“, मनपरी चुनढुंगा, ढुंगा, बालुवा माटो उत्खनन, सिमे न्ट कारखानाको बृद्धिबाट जलवायुमा छिट्टै असर पार्छ। यसबाट बच्ने विकल्प के हुन् ? सर्वपक्षमा बहस गरौं। अकोर् विषय महत्वपूर्ण मानव जीवनमा नभई नहुने भने को शिक्षा हो । वर्तमान परिवे शसम्म आइपुग्दा ने पालको शैक्षिक क्षे त्र आफैमा कमजो र थियो । विश्वका अन्य मुलुक २१ औं शताब्दीमा पुग्दा हामी भर्खरै १४ औं १५ औं शताब्दीको अवस्थामा थियौं। त्यही शिक्षा पनि अस्तव्यस्त हु“दै जान थाल्यो । दे शमा वर्गीय शिक्षा, बे रो जगारी, शैक्षिक माफियाबाट भ्रष्टीकरण, ब्रम्हलुट, व्यापारीकरण, द्वैध शिक्षा नीति, राजनीतिको अस्त्र बन्दै गयो । रिस उठ्ने हरुलाई प्रयो ग गनेर् थलो समाजको लागि भन्दा महत्वकांक्षा राख्ने हरुबाट खो लिएका विद्यालयबाट खासै गुणस्तरीय शिक्षाको कल्पनै नगरौं।
साक्षरमुखी मात्रको शिक्षा पनि विकृतिमूलक रह्यो । जसको कारण आफ्नै स्वार्थसिद्ध गनेर् अभीष्टबाट प्रत्यक्ष नानी बाबुहरुलाई असर पा¥यो । अझै पनि शिक्षाको पहु“च नपुग्ने सर्वहारा वर्ग एवं लम्पट सर्वहारा वर्ग, खाते , असहाय निसहाय सडकछाप बालबालिकालाई शिक्षाको ‘स’ पनि थाहा छैन। भर्खरै चिटिङ परीक्षाको भारी बो के को शिक्षाले हो मसे न्टरका अवधारणा हटाउ“दा एसएलसीबाट कक्षा ८ मा झरे को छ। हो म से न्टर हटाएर मात्र स्कूलहरु मर्ज गरे र मात्र को रा खो क्रा भाषण गरे र मात्र शिक्षामा सुधार आउनै सके न। सबभन्दा पहिलेत सत्तामा पुग्ने हरुमा दे श र जनताप्रतिको सकारात्मक सो च छैन। सत्तामा पुग्ने हरुको दाउ कसरी आर्थिक कुम्ल्याउने , मो जमस्ती, ऐ स आराम कसरी गनेर् , आफ्ना सन्तान कुन दे शमा पढाउने ? विरो धीलाई कसरी समाप्त पानेर् मै सो च हाबी भएपछि त्यसैको परिणाम शैक्षिक क्षे त्र फलदायी भएन।
न्यायप्रे मी अभिभावकज्यूहरु । हामी ने पाली हाम्रो दे श ने पालको सामाजिक परिवे श, गरिवी, बे रो जगार, अशिक्षा, अज्ञानताको निरन्तर समस्याले बल्झाउने भएकै कारण दे श सधै द्वन्द्व, झगडा, हिंसा, अराजकताबाट कहिल्यै मुक्त हुन सके न। समय–समयमा जसले जे भन्यो जता भन्यो समाजलाई पछाडि लगाउने ले लगायो लाग्ने पनि लाग्यौं। हामी राष्ट्रवादीले के पायौं के भयो ? सडकमा फाटे का चप्पल पड्काउने हरु करो डौंका गाडीमा गुड्ने भए। आलीशान दरवारमा बस्ने भए। बिरामी पर्दा सिटामो ल नपाउने हरु टाउको दुख्दा विदे शका महंगा हस्पिटलमा राष्ट्रको ढुकुटीमा उड्ने भए। विगतमा लुके र भ्रष्टाचार गनेर् ले हानी दाउ वागेर् निङ गनेर् भए। करो डको हिसाव हैन, अरबौ खरबौंको भ्रष्टाचार गर्दासम्म सबै क्षे त्र मौन छ। सुन भने र पकडे को वस्तु सम्बन्धित निकायमा पुग्दा पितल बन्यो । ३८ किलो ले मात्र नपुगे र क्वीन्टलका क्वीन्टल सुन तस्करी पनि विस्तारै स्वतः बन्दै गए। जसले न्यायको दे श र जनताको लागि कसम खाए उनैले बालिकामाथि अन्याय गनेर् भए। सिंहदरवारको सुविधा घरघरमा भन्दा भन्दै चुनाव जिते र जाने हरुले विना आयो गका नया“खाले कर्मचारी बने र राष्ट्रको ढुकुटीले नपुगे र नया“ प्रकारको ऐ न बनाएर जनतामा कर थो परे र ढाड से क्ने भए। युवा शक्ति कहा“ छन् के गर्दैछन् ? दैनिक वाकसमा लाश आउने को तीब्रता छ।
युवती धनी सुखी बन्ने कल्पना बो के र विदे श जा“दा बलात्कारको शिकार बने र बच्चा जन्माउने कारखानामा नारकीय जीवन बिताउने भए।
ने पाली जनताले त्यति ठूलो कष्ट दुःख सहे र १० वषेर् जनयुद्धमार्फत जीवन बलिदानी गरे र ल्याएको परिवर्तन जनमुखी नभइ जनतामा अन्यौल बन्न थाल्यो । राष्ट्रले खरबौं क्षति बे हो रे र १७ हजार सहिदको बलिदानबाट ने तृत्व जस्तो भए पनि के ही न के ही परिवर्तन ल्याउन साहस गरे का क्रान्ति अधुरै भए पनि ने तृत्वले धो का दिएको भन्ने आरो प लागे पनि ने पालका राजने ता हुन्। त्यस्ता व्यक्तित्व माथि श्रीमती बिरामी पर्दा सहानुभूति दिनु भन्दा आतंककारी बहानामा रिट परे को सुन्नु पर्दा दे शको अवस्था के रैछ ? कस्तो रैछ ? विदे शीले हे नेर् दृष्टिको ण छर्लङग भयो । यो राम्रो पक्ष हो इन। फे रि पनि दे शको यात्रा जो खिममा छ। विगत जस्तै विखण्डनवादी जनपीडक भन्दा सो झा तिनै नानी बाबु अवो लामाथि नै डरत्रास भएका दिन आउन थाले । सबैले चिन्ता गनेर् समय आयो ।
न्यायप्रे मी अभिभावकज्यूहरु । वर्तमान परिवे श नया“ युगको नाममा आएका सुविधायुक्त वस्तु टिभी र मो वाइलले सिंगो समाजमै विकृति ल्यायो । जसको कारण कसैका घर गृहस्थी, धन सम्पत्ति, छो राछो री र गृहस्थ जीवन ध्वस्त पानेर् गरिएको विकृतिमा सदुपयो ग गर्न नजान्दा मो बाइल टिभी समाजको कल्याण र सुविधा भन्दा विकृतिमा परिणत भयो । विश्वमा दैनिक १० जना मान्छे डिप्रे सनको शिकार हुन थाले । त्यसको असर बालबालिका पर्न थाल्यो । खानै बिर्सने , सुत्नै बिसनेर् , पढ्न ले ख्नै बिर्सने , बुवा आमा संगीसाथी, भो क तिर्खा सबै बिर्सने गरे को बे ला थप लागूऔषध, धुम्रपान, मद्यपान, जुवातासले नानी बाबुलगायत सिंगो समाजलाई विकराल समस्यातर्फ धके ल्दै छ। यसतर्फ सबै सचे त भइ आ–आफ्नो ठाउ‘“बाट लागिपर्नुहो ला भन्ने निवे दन गर्दै २०७६ ले सबैमा सद्बुद्धि, सद्भाव, मे ल र राम्रो सो चको विकास गरो स्।
Previous: एपिएफ र नेपाली सेना अपराजित
Next: नववर्षको शुभकामना–सबैमा सकारात्मक सोचले राज गरोस्